TSY MBOLA HISY NY FAMORIANA MPANAO POLITIKA HOY NY FFKM – MyDago.com aime Madagascar
TSY MBOLA HISY NY FAMORIANA MPANAO POLITIKA HOY NY FFKM
Izany rehetra izany dia avy amin’Andriamanitra, izay nampihavana antsika aminy indray tamin’ny alalan’ny kristy sady nanome anay ny fanompoana hitaona ny hafa hihavana aminy » 2kor 5:18 Io andinin-tsoaratra masina io no teny faneva noraisin’ny FFKM nandritra ny fivorian’ny Komity Foibe 35 tamin’ity taona ity, izay nanomboka ny 22 novambra ka nofaranana tamin’ny fotoam-pivavahana lehibe tetsy amin’ny Ekar Antanimena. Io ihany koa ny toriteny nosafidiana izay novelamberan’ny filohan’ny FFKM Pastora Dr Rakoto Endor Modeste androany ka niompana tamin’ny fampihavanana ho an’ny rehetra izay nandray ny fampihavanana tamin’ny alalan’ny hazo fijaliana, miaraka amin’izany ny fampihavanana ny zanan’Andriamanitra.Nisy ny fizaran’andraikitra teo amin’izy efatra mirahalahy mpitarika ny FFKM ka nitondra ny fiarahabana apostolika dia ny Mgr Ranarivelo Samoela Jaona. Namaky ny soratra masina kosa ny Mgr Razanakolona Odon Marie Arsène. Nitory ny tenin’Andriamanitra ny Pastora Dr Rakoto Endor Modeste ary namaky ny ranombavaka ny mpitandrina Rasendrahasina Lala Haja. Taorian’ny fivavahana dia nisy ny hafatra avy amin’ny Komity foibe izay novakiana tamin’izany. Raha fintinina fohy izay hafatra izay dia nisy ny fandinihana ny raharaha anatin’ny FFKM sy ny raharaham-pirenena. Tontosa araka izay niheverana azy ny fivorian’ny komity foibe 35 natao teto Antananarivo ny 22 ka hatramin’ny 25 Novambra 2012. Mankasitraka hoy ny hafatra ny FFKM eto Antanananarivo Renivohitra nanaiky nandray ny fivoriana na dia tampoka aza ary misaotra ny rehetra tamin’ny fanotronana ny fotoam-pivavahana androany. Dingana lehibe no tontosa hoy izy ireo nefa tsapa fa tokony ho tohizana izany. Momba ny vola ampiasaina dia maro ny asa miandry amin’ny ho avy toy ny fanaovana ny tranoben’ny FFKM, noho izany hoy izy ireo dia ampatsiahivina isika hanefa ny adidy. Mikasika ny fiainana anatiny dia nahazo Tonia vaovao ny FFKM. Raha ny momba ny fiainam-pirenena indray dia nambaran’ny hafatra fa ny FFKM dia mahatsapa ny vesatry ny krizy isam-baravarana izay nampitombo ny tsy fahandriampahalemana sy ny tsy maty manota, ny fidoroana zavamahadomelina. Tsy fahampian’ny firaovana ny ainy sy ny fananan’ny olona. Ny FFKM amin’ny maharaiamandreny azy ireo dia mitaona ny olona hifamela sy hibebaka, hijoro amin’ny fahamarinana. Ny asa rehetra ataony dia miombona amin’ny fotoam-bavaka. Nilaza ihany koa izy ireo fa manone alalana amin’ny fanatontosana fotoam-pivavahana. Mampirisika ny fitondram-panjakana hanatanteraka ny adidiny. Ho an’ny mpanao politika dia efa naka ny hevitry ny ankolafin-kery ny FFKM koa aoka ianareo hifanatona, hifampihaino , hilaza ny marina, hankato izay hita fa mahasoa ny firenena. Aoka izay hahasoa ny firenena no atao. Ho an’ny foloalindahy dia miantso ireo zandry sy zoky izy ireo mba hifanatona mba tandroka arov’ny vozona tokoa. Ho an’ny vahoaka dia miantso ny vahoaka izy ireo hifanatona amin’ny sarotra ary hiray hina mba ho sahy andray handraikitra. Ankoatra izay dia nanambara ireto filoham-piangonana efatra mirahalahy ireto rehefa nanontanian’ny mpanao gazety miaksika io hafatra io dia nilaza fa ny FFKM dia fiombonam-piangonana ary mitazona izay ary sarom-piaro amin’izany. Amin’ny maha fiangonana anay hoy izy ireo dia mahatsapa sy mahalala fa misy fizarazarana entin’ny ota eo amin’ny olombelona ka mandray ny teny faneva hoe fampihavanana no tena asany voalohany ka efa nataonay hatramin »izay izany.amin’ny maha fiangonana mbola manohy azy hatramin’izao. Amin’izao toejavatra misy ny firenena izao hoy izy ireo dia vao maika avoitra manokana izany asa fampihavanana izany. Efa misy ihany koa ny fandaharam-potoana izay efa tapaka efa ela ary natomboka araka ny fombam-piangonana. Mikasika ny hoe hamory ireo mpanao politika ny FFKM dia valinteny azo dia ny hoe : eo koa mahita azy. Mbola hivory ny komity foibe handinika izany.Ankoatra izay dia fantatra fa ny Mgr Razanakolona Odon Marie Arsène no hitantana ny FFKM manomboka ny volana Janoary 2013 izao. Any Antsiranana indray no hanatanterahana ny fivorian’ny Komity Foibe amin’ny taona 2015. Efa nirary krismasy sy taom-baovao sambatra ho an’ny kristianina ihany koa ny FFKM. Marihina fa mpanao politika vitsivitsy no nanatrika ny fotoam-pivavahana androany teny amin’ny Ekar Antanimena. Ho an’ny Ankolafy Ravalomanana manokana dia tazana teny an-toerana ny Cst Robert, ny Ct Sazalahy Tsianihy. Raha io hafatry ny FFKM io dia tsy mbola hisy aloha ny famoriana mpanao politika,sy fampihavanana ireo mpifanandrina politika eto amin’ny firenena mba hamahana ny krizy kanefa izy ireo dia mahatsapa ny vesatry ny krizy amin’ny vahoaka Malagasy.
Auteur Solo Razafy*Publié le 25 novembre 2012 Catégories Politique
15 réflexions sur « TSY MBOLA HISY NY FAMORIANA MPANAO POLITIKA HOY NY FFKM »
25 novembre 2012 à 22 h 46 min
Raha izaho manokana aloha dia Kely finoana amin’ity fikasana FFKM hanao famoriana politika ity aho, raha mbola amin’izay fipetaky ny toe-draharaha eto Madagasikara izay no jerena.
Ny tiako ho lazaina dia izao:
Mbola tsy afaka an-tsaiko sy eo ambany masoko ny zava-nitranga nanomboka 2008 izay naha filohan’ny FFKM an’i OMAR! Ny fomba mitanila nataony, Ny tsy mba nijoroany vavolom-belon’ny fahamarinana teny amin’ny Falda Antanimena raha novingitina sy notevatevaina ary nosamborina ny pastera Lala Rasendrahasina!
Toa tsiky sy kopakopa-tànana ery an-davarangana amin’olona no nataony anefa tena am-bavahoana ny toe-draharaha.
Fihetsika anisanynampikorosy tanreraka ny toe-draharaha, ary ny fiainan’ny vahoaka malagasy manontolo! (Afatsy ireo nanongam-panjakana sy ny forongony)
Koa, na dia te handroso amin’izany fifamelàna izany aza, mba mahalasa saina ihany ny tsy mba fitsoran’ny eveka OMAR!
Sady mpitondra ambony amina fiangonana lehibe. Tsy sanatria fitiavana te hitsara velively!
Raha raisiko ny fieken-keloka sy fanenenana nataon’i A.Charles,dia tena fanenenana marina sy fibebahana ny azy, ary narahany asa fa tsy am-bava fotsiny!!
« Mirary krismasy sambatra! » hoy ianareo??
Marina fa ny kristianina dia nampianarina hahay hifaly am-pò, tsy misy maha ratsy izany amiko.
Saingy, toa toy ny mandatsa ihany izany firariana izany, raha ao anatin’izao korontana, tsy fandriampalemana, vono-olona, fandobàna isan-karazany izao! Ny tebiteby tsy andro tsy alina! Ary indrindra ny fikorosohan’ny toe-tsaina sy toe-mpanahy ary ny fitotonganana hoamin’ny fifankalahan’ny samy malagasy izao!
MOA VA TSY MAMPANONTANY TENA????
Hinoako fa hiova ny fomba fijery raha toa ka injay hono atoa Odon Marie Arsène Razanakolona ka handona latabatra hiteny an’i andry rajoelina ny tsy rariny sy tsy fahamarinana vokatry ny fanonganam-panjakana niarahany nanao
26 novembre 2012 à 7 h 48 min
Raha fahitako azy dia tsy dia hita @ sehatra iraisam-pirennena loatra ny FFKM. Raha tiana ny ny hisian’ny fankatoavana eto anatiny izay sehatra iasany noho izany, dia tokony hisy « fanonganampanjakna FFKM » ao anatiny ao, ka tokony ho soloina ireo mpitondra voarohirohy t@ krizy izao, tsy lany olo-manga na olo-masina akory Madagasikara, avy eo vao hino aho fa hiveriny @ hasiny ny FFKM fa raha ny teo ihany no teo, di
Intervention téléphonique du Pdt Ravalomanana au Magro Tamatave samedi s’est insurgé contre la vente à prix bradé de l’avion présidentiel, acheté avec l’argent de l’Etat, donc un bien public.
ANY @ DADA NY LAKILE HOY IREO LEADER TENY @ Magro ,KA HOY AO NAMPIKATSIN’iza ny tolona .
26 novembre 2012 à 9 h 44 min
POROFO IZAO ,fa na hanitra i maitre io tiako lazaina io ,ireo ankaiky an drajoelina ,toa an i Olga ,ihanta,sy ny ministra hafa ManaNdafy ,…Botozaza…dia TSY MAHAVOA AN DRAJOELINA (inefficaces ) ,KOA Mila ny vahoaka mihitsy hamely an drajoelina fa potika ny tany .
Il est invité partout et prépare actuellement un voyage vers l’Europe a déclaré Guy Rivo Randrianarisoa
VOYAGE EN EUROPE,il aurait du le faire depuis 3 ans !
26 novembre 2012 à 10 h 51 min
Izao ataon’ny FFKM izao no tena atao hoe « parler pour ne rien dire » !!!
Entiko eto kely ny voalazan-dry zareo HMF, atsy amin’ilay sujet iray, izay navoakan’Ingahy Solo Razafy !
« Manainga ny rehetra ihany koa hoy izy ireo mba tsy iray tsikombakomba amin’ny FAMONOAN’OLONA MIVANTANA NA ANKOLAKA, fa samy handray ny andraikitra tandrify antsika manoloana ny mpiray tanindrazana ».
» Noho izany hoy ny HMF raha tena mbola misy fitiavan-tanindrazana marina ao am-potsika tomponandraikitra, mpitondra fivavahana, raiamandreny, manampahaizana, vahoaka sns…eto amin’ny firenena , dia vonjeo ny vahoaka malagasy, ary mitsangàna fa aza lany andro amin’ny fanambaràna sy ny fisehoana eny amin’ny haino aman-jery fotsiny » !
Fanontaniana : Iza no tena anisan’ny LANY ANDRO AMIN’NY FISEHOANA ENY AMIN’NY HAINO AMAN-JERY ? Ary hitsangana fa hanao inona marina ?
Hi-wawawa araky ny voalazan’ilay Berthe fotsiny ?
Miala tsiny aminareo, fa diso fantatrareo loatra ny NY ZAVA-MISY SY NY HO VOKA-DRATSINY, fa manao paolitikan’ny ôtrisy ianareo !
Ny tsy hitovizanareo amin’ity ôtrisy fotsiny, dia ianareo tena hita-tava !
Izao no tena atao hoe NON ASSISTANCE À PEUPLE EN DANGER !
Rahatoa ka tena mieritreritra ny hoavin’io firenena io ihanareo, dia aza miantehatra amin’ny mpanao paolitika fotsiny, fa mba raiso koa ny andraikitra lehibe miandry anareo.
Mandehàna mitety ireo tompon’andraikitra rehetra any ivelany, ary lazao amin-dry zareo ny tena zava-misy rehetra ! Resaka fitaka be io resaka hoe, avelao ny samy malagasy no hifandamina !
Tsy hisy FILAMINANA SY RESAKA VANONA izany eo, rahatoa ka mbola fitaovam-piadiana no entin’ny sasany eny ambony latabatra !! Na ny mpanao gazety aza hono tsy milaza izay marina intsony koa, mahita ny ataonareo ! Santionany itony :
26 novembre 2012 à 14 h 23 min
Tohin’io voalaza eo ambony io ! MITSANGÀNA ARY LAZAO AMIN’NY VAHOAKA NY MARINA !
Momban’ny hetsika nataon’ny HMF, dia hita tao amin’ny gazety roa ny hoe :
Gazetiko : « Ny basy ; ny fonja ; ny fahefàna ; ny vola no miteny eto amin-tsika » (Mazava ary somary lavalava ihany ny lahan-tsoratra)
Midi-Madagascar : « HMF : Aucune considération du peuple malgache actuellement » (Sady somary maivana ny fanazavàna, no fohy)
Noho izany, rehefa fantatratreo ao amin’ny HMF ihany izany, dia tsara rahatoa ka manao fanambaràna mazàva an’ireo voalaza rehetra ireo ianareo ; atao amin’ny teny frantsay sy anglisy, dia mba apetrakareo any amin’ireo ambasady rehetra ao an-toerana, indrindra any amin’ny Vondrona eraopeana !
Mangataka an’i MyDago (Solo Razafy) koa, mba hanadiady miaraka amin-dry zareo ao amin’ny HMF, momban’io raharaha niseho teny Alarobia-Amboniloha ny alin’ny zoma hifoha sabotsy io. Dia mba aza manao tatitra toy ny nataon’ilay mpanao gazetin’i Midi Madagascar re azafady ê ! Afaka manantona tsara an’Ingahy Guy Rivo sy ry Hanitra ianao r’Ingahy Solo Razafy, fa nandeha namangy sy nitsapa alahelo tany amin’ny fianakavian’ireo olona, izay niharan’ny herisetra feno habibiana ry zareo !
Tsara mba ho fantatry ny rehetra ny zava-niseho marina ! Ny tiako ho marihina mantsy, dia ny fanomezam-baovao toy ny nataon’ny Midi izao, dia toa lasa fanakonana ny tetika ratsy ataon’ireto mpanongana ireto isan’andro vaky izao ! Vokatry ny tsipaipaika ve ?
Ny FFKM kosa mila mitandrina fa tsy mora anie ny nahazo ny filoha mpikambana iray tao t@2009 nentin’ny be basy t@ vozony eeee; mila fitoniana tsara koa ireo vao tena afaka miroso @zany fanelanelanana izany, atao azo antoka sara fa tsy mitanila ireo be basy ireo, ka hanaraka ny hevitra tapaka eo fa tsy hanao izay hampanjaka ny heviny, satria tsy tokony hanao pôlitika ireo
26 novembre 2012 à 20 h 56 min
« …satria tsy tokony hanao pôlitika ireo »
Izay indrindra ilay hevitra diso ry Ny tena Andry tsy domelina â !! Vao mihiditra misera ato ianao, dia efa miresaka pôlitika. Fehiny, dia manao pôlitika !
Ny fitsanganan-dry zareo, ary izao fanambaràna ataon-dry zareo izao dia efa « fanehoan-kevitra pôlitika » !
Noho izany dia rehefa « maneho hevitra » ihany, dia raisina atramin’ny farany ny adidy rehetra izay tokony hiandraketana ! Io miafinafina lava ao ambadik’io fivavahana io, no tsy mampandeha ny raharaha !
Mpitondra fivavahana ry zareo, marina izany, fa anisan’ny « olom-pirenena malagasy ary matoan-teny » !
Raha tena nihetsika izireo, tsy ho tahak’izao ny toe-draharaha ! Rehefa tsy hanao, dia mijanona any amin’ny maonastera sy ny lava-tranony tsirairay avy ; ary tsy hiteniteny hoe mitsangàna fa very ny firenena !
Tsy ny mpanao pôlitika sy ny miaramila no hahavahy ny krizy izay misy ! Ny vahoaka irery ihany no tena tompon’andraikitra, toa izay niseho rehetra tany amin’ny firenen-kafa !
Efa hatry ny ela no tokony nitarika ny vahoaka ry zareo, rehefa hita fa tsy mahavit’azy ny mpanao pôlitika ; rano raraka teo an-damosin’ny gana anefa izany faniriam-bahoaka izany !
Tsy mila mitarika eny an-dalambe akory aza raha ilaina, fa soratra alefa any amin’ny CI dia vita !
Talentan-dramalagasy io manao « zara fa vita » io ! « Ni fait ni à refaire » hoy ny sasany, fa ny fantatra aloha dia « mal fait » ; moramora amin’ny sasany ery ny milaza fa MANARA-PENITRA DAHOLO IZAY REHETRA ATAONY ! Be loatra ireo toka-maso any amin’ny tanin’ny jamba !
Ilay fanaraha-penitra anie lesy midika zavatra hafa mihintsy e!!
TONGA LAFATRA @ ASA RATSY REHETRA NO TENA DIKANY ETO.
Ny Hopitaly toera-pitsaboana aefa tsy misy na Coton aza dia mbola mihidy indray eny ambanivolo eny
nefa ny tanin’i dada hangalarana sandohana hanaovana Hopitaly manara-penitra? efa miaro FANGALA-
RANA MANARA-PENITRA sy HAGEGENA MANARA-PENITRA IZAY.Dia toy izany hatatrany ho hita etsy
sy eroa @’ity resaka manara-penitra lava ity.
Izaho aloha dia tsy dia miandry zavatra loatra @’ireto FFKM ireto rha resaka vahaolana e!!tsy matikilolo!!
Amstong sy Neninoro ! MAZAVA be!! manoana anareo 100% na dia Katolika aza aho,raha mba misy indray
farafaha-alikamatiny hoe mba BAINGA MIVADIKA dia zavatra hafa izay ! fa amiko ny fijoroan’ireo izay miara-
nandray anjara t@’ireo FOZA nahatonga izao fahavoazana mioha-pampana izao dia MBOLA TSY DIA HILAINA
fa amiko toa FANDATSANA ny FIJOROAN’IREO EO ary FANESOANA ny valala be mandry mihintsy aza.
26 novembre 2012 à 23 h 41 min
Efa namono ny voay ireo na dia tsy nitavandra ny vanginy aza SANATRIA!!!
Nefa mino aho fa nisy saosy be nipitika tao matoa ireo NIJABAKA , nivarotra ny Fanahiny
t@ Devoly. MAHONENA!!!!!iza intsony no antenaina eeeeeeeee
27 novembre 2012 à 8 h 46 min
Za koa katolika Rana a! ary mbola iringiriny noho ianao aza angamba, fa amiko rehefa vandana dia kary. Raha te handamina na hampihavana ny FFKM dia mila ekipa neutre sy vaovao ao,fa na OMAR na LR dia sady juge no partie ao raha ny tantara no zohina ka tsy azo antenaina hahalamina zavatra izany. Raha hiaiky ampahibemaso daholo indray zareo fa nanao ny tsy mety nanohana sy nampidi-kizo ny firenena toy izao, dia mety ho hafahafa ahay ny fomba fijery, @ maha Malagasy hoe ny heloka ibabohana mody rariny… Fa raha omaly ianao Sol… anio ianao fa…dia very fanahy mbola velona ny valala be mandry, satria tsy fohy fisainana akory ny olona.
27 novembre 2012 à 10 h 02 min
Ny mpitendry anie any ampiangonana, mampiasa sol fa ê ! DIA FALY IRETO OLONA MIHIRA !
Miala tsiny fa ianareo katô mihintsy no efa hatry ny ela no voajonon’ireo damôpra ireo tamin’ity resaka mikaofesy ity ! Mibaredaka sy mitantara ny tsy tokony tantaraina any amin-dry zareo, any ka azony ary entiny amin’ny sanga daholo !
Voatery nanasa tanana sy nanotsam-bava tamin’ny ôbenita mihintsy ny sasany !! MDR !!!
Rehefa natao ny fandinihina dia izao ê ! Tsy ny miaramila, na ny mpanao pôlitika na ny mpitondra fivavahana no hampiova ny toe-draharaha, fa ny vahoaka irery ihany !
Rahatoa ka mahafaly an-dramalagasy ny mihaina ao anatin’ny baoridelina, dia aoka izy hiosona ao !
Tena mankaleo be ilay tantara, na dia mampalahelo aza !
27 novembre 2012 à 11 h 41 min
Marina fa ny vahoaka irery ihany fa @ fomba ahoana????
fantany tsara izany Kintana ka izay no hanapenany ny vavan’i Vahoaka
manomboka @’tsy fahazahoana Radio izany sy ny TV a!dia izay mba mietsika
moa dia mivoaka ho faty ohatra ny kakana, tsiponiny oahtra ny Parasy satria mitsitokotoko toa Tain’amboho.
Tsy misy afaka ny hiray hina intsony fa mafy ny fiainana.
27 novembre 2012 à 12 h 29 min
Mba aiza ary izany hoe, fitiavam-pirenena izany ê ?
Fa inona marina moa no tena tadiavan’ireto vahoaka ireto ê ? Mba lasa saina ihany aho ranona ; any ka itony serasera itony aza toa lasa fandanian’andro fotsiny ho an’ny sasany, ary fitadiavam-bola ho an’ny mpikarakara (miala tsiny aminareo ry MyDago) !
Efa hita izao fa tena tsy ho ela dia hivarina any an-kady, ary ho potipotika sy tsy ho tafarina intsony ilay tanindrazana dia mbola ny rendrarendra, fialam-boly sy fisehosehoana no mahafatifaty ny sasany, na ny ankamaroan’ireto BONOBOS !!!
Sady sorena ihany aho letsy no tezitra, fa ny malagasy angamba dia anisan’ireo azo lazaina hoe Peuples maudits â !
Faly mandihy ao anatin’ny ranon-tay, DJ rahateo moa no lasa Filoha ! Fitiavan-tanindrazana sy fanohanana ny ara-dalàna ary fieritreretana an’ireo malagasy mpiray tanindrazana no nandraisako anjara atramin’izay, fa toa tena herim-po very maina araky ny tenin’ny ntaolo izany mananatra adala izany !
Haka rivotra kely aloha, hisaintsaina, fa dia mazotoa daholo !
Précédent Article précédent : An-tsary Magro milay, 24 nov 12
Suivant Article suivant : MANAO POLITIKA MALOTO, MAMITAKA OLONA RAJOELINA